Abavelisi be-Dent Puller Lifter-abavelisi kunye nabathengisi base China
Izixhobo Zokulungisa Imoto I-Auto Glue Puller Hand Lifter Puller Lifter
Inombolo Umba: BT211008
1. Umzimba weAluminiyam
2. Iqhina lohlengahlengiso lweSinyithi
3. Amantongomane / i-Bolts / i-Pivot pin engenasici
4. Isikere esinye ngaphezulu kwesiphakamisi sesifotho sisetyenziselwa ukuhlengahlengisa umphakamo ophakathi ophakamisa isifotho.
5. Emazantsi ophakamisa i-dent yi-silicone, hayi irabha yesiqhelo, ethambileyo kwaye ayinabungozi kwipeyinti yeoyile kwaye inokudilizwa.
Ngaba unokusetyenziswa ngokubanzi, Umzekelo, iMoto eziZenzekelayo, Isikhenkcisi esiSithuthuthu kunye nomatshini wokuhlamba iimpahla, Khusela ipeyinti yoqobo, susa imiphunga ngokukhawuleza. Esi sixhobo asihambelani neekona okanye ii-creases.
I-PDR yokulungisa i-Dent Kit yokuPhakamisa i-Car Dent Removal Puller Tab Isichotho sokuphakamisa
Inombolo Umba: BT211007
Ngexesha lokusebenza, kuya kufuneka uhlengahlengise amandla akho ngokuthe ngcembe de indawo apho kufunyenwe khona i-dent kwiflethi kwaye iphinde ichache ngokupheleleyo.
Izixhobo ze-PDR zenziwe nge-Mini Mini Lifter Dent Mini Baby Face Lifter
Inombolo Umba: BT211006
Umsebenzi olula, lungisa i-dent ngokukhawuleza.
Ukupeyinta okungafunekiyo komzimba weemoto, akuyonakalisi ipeyinti yoqobo.
Ubungakanani obahlukeneyo beethebhu zokutsala, ezisetyenziselwe ubungakanani obahlukileyo besifotho.
Ifanele umphezulu wemoto, ipleyiti yesinyithi, ifriji, umatshini wokuhlamba kwaye kungekudala.
Izixhobo zokulungisa amazinyo iPDR Puller Dent Remover Lifter
Inombolo Umba: BT211005
Umsebenzi -Simple, lungisa i-dent ngokukhawuleza.
-Ngokungenakulungiswa komzimba we-car dent, ayonakalisi ipeyinti yoqobo.
Ubungakanani obahlukeneyo beethebhu zokubambelela, ezisetyenziselwe ubungakanani obahlukileyo besifotho.
Ezi ziinxalenye ezincinci zezixhobo ze-PDR. Zisetyenziselwa ukulungisa i-dent yazo zonke iintlobo zentsimbi ethe tyaba, njengobuso betafile yensimbi yemoto kunye nensimbi yomatshini wokuhlamba isitya. Ngokuqhelekileyo, iithebhu ezinkulu zisetyenziselwa ukufakela ezinkulu, kwaye iithebhu ezincinci zisetyenziselwa ukufakela amancinci amancinci. Unokusebenzisa ngaphezulu kwesinye isithuba sokutsala kwisifotho.
Izixhobo zokuLungisa iiDent ezingenamibala iPDR Puller Lifter
Inombolo yento: BT211004
Yenziwe ngezinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni, ezihlala ixesha elide ukuyisebenzisa.
Ngaba unokukunceda ukulungisa imo emotweni yakho.
Ayizukulimaza umphezulu opeyintiweyo.
Izixhobo zoLungiso lweMoto yoBuchule boLungiso lweDent Lifter
Inombolo Umba: BT211003
Esi siphakamisi sokukhuphela imoto sisona sixhobo sibalulekileyo ekulungiseni i-dent yemoto. Ukuqina kwentwasahlobo kunyanzela amandla eqine ngokuchanekileyo, kusenza ukuba ukusebenza kwe-lifter kube lula kakhulu nakwabafundisayo. Umphakamisi wenziwe ngealuminium kwaye uyomelela, uyaphatheka, kwaye umelana nomhlwa.
Izixhobo zokuLungisa iiDent Isandla esiphakamisa isandla esincinci
Inombolo Umba: BT211002
Izixhobo zokuLungisa iiDent Umsebenzi weSandla esiPhakamisa iZandla:
4. Isikere esinye ngaphezulu kwesiphakamisi sesifotho sisetyenziselwa ukulungelelanisa ukuphakama okuphakathi kwesifotho
5. Ngenkqubo ye-sandblasting oxidation, ukuvakala okuthe tye kunye nokubonakala okuhle, Imveliso yomelele kwaye yomelele.
6. Emazantsi ophakamisa i-dent yi-silicone, hayi irabha yesiqhelo, ethambileyo kwaye ayinabungozi kwipeyinti yeoyile kwaye inokudilizwa.